Isu Tinoshandisa Sei Zvemukati Kubva Kumakambani Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 12, 2012 Mugovera, Mbudzi 10, 2012 Jenn Lisak Golding
Takashanda pamwe chete nesu digital catalog muparidzi anotsigira, Zmags, kugadzira ino yakanaka uye inonzwisisika infographic kune isu isu tinoshandisa zvemukati kubva kuma brand sevatengi Zvimwe zvakawanikwa zvakatosimbisa zvandaiziva, nepo zvimwe zvaishamisa. Nekudaro, iyo yakazara meseji ndeyekuti zvemukati zvako zvinofanirwa kuve zvinowirirana pane akawanda madhijitari.
Ungazviita sei? Inozivikanwa dhizaini uye zvakajairika mashandiro pamadhizaini. Kushandiswa kwemifananidzo uye zvakapfuma midhiya zvakare inochengetedza kutarisisa nguva. Kuve nezvakasiyana zvemukati zvinobatsira nekutendeuka zvakare.
Chii chawakawana chinonakidza?
Tags: mutengiContent Marketingmobile marketingkuverengakutengeswa kwepiritsi
Kunyunyuta Hakusi Nyore
Mbudzi 12, 2012 na3: 12 PM
Ndainakidzwa chaizvo nekushanda pane ino infographic! Pfupiso inonakidza pamusoro pemhando dzipi dzemukati dziri kuburitswa, pamwe nepatiri kuverengera.
Mbudzi 12, 2012 na10: 52 PM
Iwe wakanyatsoputira buti pane ino. Iyo inomanikidza infographic - ini ndinoda dhizaini neruzivo - zvakajeka!
Mbudzi 13, 2012 na3: 59 PM
Hi Hi, ndinoda kushandisa iyi infogrpahic muResouce Center yechiitiko chandiri kushambadza. Ndingaite sei izvi?
Mbudzi 13, 2012 na5: 51 PM
Mhoro Stephanie! Ndiri kufara kukubatsira kunze, kana kukuisa iwe kusangana nevanhu vakasika iyo infographic. Ndokumbirawo usvike kwandiri pa jenn@dknewmedia.com. Ndatenda!
Jan 24, 2013 pa 6: 36 AM